မိုးတွေရွာ ဖို့ ၁၂နာရီ ခန့်သာ လို ပါတော့တယ် – Shwewiki.com
ထန် တလန် ၊ဟားခါး ၊ဖလမ်း ။တီးတိန် ၊တွန်းဇံ ၊ဂန့်ဂေါ ၊ကလေး ၊ကလေးဝ ၊မော်လိုက် ၊ခန်းပတ် ၊တမူး ၊မိုးရေး ၊ဖောင်းပြင် ၊ဟုမ္မလင်း ၊ပင်လည်ဘူး ၊ဝန်သို၊ ကောလင်း ၊ကျွန်းလှ ၊သဖန်းဆိပ် ကန့်ဘလူ ၊ချပ်သင်း ၊ချပ်ကြီး ၊ထီးချိုင့်၊ မြတောင် ၊အင်းရွာ ၊ဘုံချောင်း ၊အင်းတော် ၊ကသာ ၊နန့်သာ ၊မန်စီ ၊မော်လူး ၊နန့်စီအောင် ၊မော်ဟန် ၊မိုးညှင်း ၊ဘီလူး ၊နမ့်မား ၊နမ့်မွန်း ၊ဟိုပင် ၊လုံးတုံ ၊အင်းတော်ကြီးအိုင် ၊ပင်ဘော ၊မိုးကောင်း ၊နမ္မတီး ၊ခန္တီး ၊လဟယ် …….
ဖားကန့် ၊ကာမိုင်း၊ မြစ်ကြီးနား ၊ဆဒေါင် ၊အင်ဂျင်းယန် ၊ချီဗွေ ၊ပန်ဝါ၊ ဝိုင်းမော်၊ လိုင်ဇာ ၊ဗန်းမော် ၊ရွှေကူ ၊နမ့်ခမ်း ၊မူဆယ် ၊ကွတ်ခိုင် ၊သိန်နီ ၊လောက်ကိုင် ၊ကွမ်လုံ ၊လားရှိုး ၊ကျောက်မဲ ၊သိပေါ၊ ပြင်ဦးလွင် ၊မိုးကုတ် ၊ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ် ၊တာချီလိတ် မြို့များ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် နေ့အပူချိ်န်များကျဆင်းကာ တစ်ိမ့်စိမ့်ရွာမယ် စွေမိုးကြောင့် အအေးပိုမည်ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာ အအေးမိခြင်း ဖျားနာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သဖြင့် မိုးရေထဲထွက်ခြင်း ရှောင်ရှားသင့်ပြီး ရေနွေးပူပူသောက်သုံးသင့်ပါတယ်…
သယ်ယူပိုိ့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်ကြီးများ ကားမိုးကာကို လုံမလုံစစ်ဆေးပြီး လုံခြုံအောင်အုပ်ကြပါ တောင်သူလယ်သမားများကတော့ ရက်အဝေးကြီးကထဲက အထပ်ထပ် အခါခါသတိပေးပြီးဖြစ်လို့ လုံခြုံတဲ့ အမိုးအကာအောက် ရောက်ရှိနေပြီဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ရပါတယ် ရေထိမခံနိုင်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူများလည်း အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်…ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်မရှိပါဘူးနော်…။
မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်း မကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာလည်း မိုးအုပ်ဆိုင်းနိုင်ပြီး နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်…..။
26/12/2019 at 4:54pm (MMT) SU SU SAN
မိုးတှရှောလာဖိုိ့ ၁၂နာရီခနျ့သာ လိုပါတော့တယျ….Rainy Day…27/12/2019…
ထနျတလနျ ၊ဟားခါး ၊ဖလမျး ။တီးတိနျ ၊တှနျးဇံ ၊ဂနျ့ဂေါ ၊ကလေး ၊ကလေးဝ ၊မျောလိုကျ ၊ခနျးပတျ ၊တမူး ၊မိုးရေး ၊ဖောငျးပွငျ ၊ဟုမ်မလငျး ၊ပငျလညျဘူး ၊ဝနျသို၊ ကောလငျး ၊ကြှနျးလှ ၊သဖနျးဆိပျ ကနျ့ဘလူ ၊ခပျြသငျး ၊ခပျြကွီး ၊ထီးခြိုငျ့၊ မွတောငျ ၊အငျးရှာ ၊ဘုံခြောငျး ၊အငျးတျော ၊ကသာ ၊နနျ့သာ ၊မနျစီ ၊မျောလူး ၊နနျ့စီအောငျ ၊မျောဟနျ ၊မိုးညှငျး ၊ဘီလူး ၊နမျ့မား ၊နမျ့မှနျး ၊ဟိုပငျ ၊လုံးတုံ ၊အငျးတျောကွီးအိုငျ ၊ပငျဘော ၊မိုးကောငျး ၊နမ်မတီး ၊ခန်တီး ၊လဟယျ …….
ဖားကနျ့ ၊ကာမိုငျး၊ မွဈကွီးနား ၊ဆဒေါငျ ၊အငျဂငျြးယနျ ၊ခြီဗှေ ၊ပနျဝါ၊ ဝိုငျးမျော၊ လိုငျဇာ ၊ဗနျးမျော ၊ရှကေူ ၊နမျ့ခမျး ၊မူဆယျ ၊ကှတျခိုငျ ၊သိနျနီ ၊လောကျကိုငျ ၊ကှမျလုံ ၊လားရှိုး ၊ကြောကျမဲ ၊သိပေါ၊ ပွငျဦးလှငျ ၊မိုးကုတျ ၊ကြိုငျးတုံ၊ မိုငျးဖွတျ ၊တာခြီလိတျ မွို့မြား မိုးရှာသှနျးနိုငျပါတယျ နအေ့ပူချြိနျမြားကဆြငျးကာ တဈိမျ့စိမျ့ရှာမယျ စှမေိုးကွောငျ့ အအေးပိုမညျဖွဈပွီး ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲမှာ အအေးမိခွငျး ဖြားနာခွငျးမြား ဖွဈပျေါတတျသဖွငျ့ မိုးရထေဲထှကျခွငျး ရှောငျရှားသငျ့ပွီး ရနှေေးပူပူသောကျသုံးသငျ့ပါတယျ…
သယျယူပျိုိ့ဆောငျရေး မျောတျောယာဉျကွီးမြား ကားမိုးကာကို လုံမလုံစဈဆေးပွီး လုံခွုံအောငျအုပျကွပါ တောငျသူလယျသမားမြားကတော့ ရကျအဝေးကွီးကထဲက အထပျထပျ အခါခါသတိပေးပွီးဖွဈလို့ လုံခွုံတဲ့ အမိုးအကာအောကျ ရောကျရှိနပွေီဟု ယုံကွညျမြှျောလငျ့ရပါတယျ ရထေိမခံနိုငျသော လုပျငနျးလုပျဆောငျနသေူမြားလညျး အဆငျသငျ့ပွငျဆငျပွီးကွလိမျ့မယျလို့ ယူဆမိပါတယျ…ရကွေီးရလြှေံ ဖွဈပျေါနိုငျခွငျမရှိပါဘူးနျေျာ…။
မန်တလေးတိုငျးအထကျပိုငျး မကှေးတိုငျးအထကျပိုငျးတှမှောလညျး မိုးအုပျဆိုငျးနိုငျပွီး နရောကှကျကြား မိုးအနညျးငယျရှာနိုငျပါတယျ…..။
ကျိုက်ထီးရိုး ကို ဘုရားဖူးလာ မည့် မိတ်ဆွေများ ကို ပိုနီးတဲ့ဖြတ်လမ်းလေး ညွှန်ပါရစေ